ED ရောဂါကူးစက်မှု - Porn On Your Brain
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသိသိသာသာများနှင့်ဘုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာပါပဲ။ မကြာမီက epidemiological လေ့လာမှုများ 10-40 အသက်ယောက်ျား၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်လုံလောက်သောစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်စုစုပေါင်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်, ပြင်းထန်သို့မဟုတ်ပြည့်စုံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီအသက်အရွယ်အမျိုးအစားထဲမှာယောက်ျားတစ်ဦးအပိုဆောင်း 25% အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း erectile အခက်အခဲများရှိသည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြည့်စွက်ရန်အလယ်အလတ်များ၏ပေါင်းစပ်ပျံ့နှံ့အသက်အရွယ် 22 ဖွငျ့% 40 မှအသက် 49 မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70% ကနေမြင့်တက်အဖြစ်ရောဂါအလွန်အသက်အရွယ်-မှီခိုသည်။ လူပျိုအတွက်လျော့နည်းဘုံသော်လည်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနေဆဲ 5% 10 ၏အသက်အရွယ်ကိုအောက်တွင်လူတို့၏ -40% သာသက်ရောက်သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနေတွေ့ရှိချက်စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်, လူ့လည်ပတ်, အသက်ကိုရတတ်၏အလုံးစုံအရည်အသွေးပေါ်သိသိသာသာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသက်ရောက်မှုကဖော်ပြသည်။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအန္တရာယ်အချက်များအနက်များတွင်ဆီးချိုရောဂါ, နှလုံးရောဂါ, သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ကြပြီး HDL အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့လေ၏။ ဆီးချို, သွေးတိုး, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စိတ်ကျရောဂါအဘို့အဆေးဝါးများလည်း erectile အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဓါတ်ရောင်ခြည်သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာများအတွက်, ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ဦးအနိမ့်ကျောရိုးဒဏ်ရာသို့မဟုတ်အခြားအာရုံကြောရောဂါများ (ဥပမာပါကင်ဆန်ရောဂါ, မျိုးစုံနဗ်ကြော) ရှိခံကြသူလူတို့တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမြင့်မားပျံ့နှံ့ရှိသေး၏။ ဆေးလိပ်သောက်, အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အထိုင်များအပြုအမူအပါအဝင်ဘဝစတိုင်အချက်များ, အပိုဆောင်းအန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အမျက်ဒေါသများပါဝင်သည်။ အဟောင်းတွေလူတို့တွင်၎င်း၏တိုးပွားလာပျံ့နှံ့နေသော်လည်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအိုမင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံမှန်သို့မဟုတ်မလွှဲမရှောင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ အန်ဒရိုဂျင်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အသက်အရွယ်-related ကျဆင်းမှုအကြားဆက်ဆံရေးအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ဒါဟာကြောင့်အိုမင်း-related hypogonadism မှ (ဖြစ်ပွားမှု 5% ထက်နည်းပါးလာအတွက်) မရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Erectile ချို့ယွင်းလေးနက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူတစ်ခွအေနအေသည်နှင့်တစ်ဦးလူသားရဲ့အလုံးစုံသုခချမ်းသာ, Self-လေးစားမှုနှင့်လူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်။ ယင်း၏ဖြစ်ပွားမှု၏ကွန်ဆာဗေးတစ်ခန့်မှန်းသန်း 10-20 အကြားယောက်ျားမှာကြပြီ။ ထို့အပွငျက erectile ပြဿနာများထွက်-လူနာ 400,000 များအတွက်ဆရာဝန်လည်ပတ်မှု, 30,000 ဆေးရုံတွေမှာလူနာရောက်ရှိမှုနှင့် 146 သန်းဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများကနှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေး outlay အကောင့်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။
1948 အတွက် Kinsey ရဲ့အစီရင်ခံစာအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖြစ်ပွားနေကျဖြေရှင်းရန်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်, ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အဘို့အ stratified 12,000 ယောက်ျားများ၏အသေးစိတ်အင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီးဒီ sudy ထံမှရလဒ်များ, အသက်အရွယ်နှင့်အတူခွန်အားမရှိခြင်းတစ်ခုတိုးပွားလာမှုနှုန်းညွှန်ပြ။ ၎င်း၏ပျံ့နှံ့ 1 နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့် 19%3နှစ်ပေါင်းထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် 45%,7နှစ်အောက်အသက် 55 နှစ်အောက်အမျိုးသားများတွင် 25% ထက်လျော့နည်းအဖြစ်ယောက်ျား၏အ 75% ကိုးကားခဲ့သည်။ 1979 ခုနှစ်, Gebhard အဆိုပါ Kinsey ဒေတာ reanalyzed နှင့်တထောင်ငါးခုကျော်ယောက်ျားတစ်ဦး chort အတွက် 42% erectile အခက်အခဲများမှဝန်ခံခဲ့သည်။
ယေဘုယျလူဦးရေကနေဆင်းသက်လာဘာသာရပ်များအပေါ်ဖျော်ဖြေတခြားလေ့လာမှုနှစ်ခုအဓိကပြဿနာများ, နမူနာ၏နည်းလမ်းနှင့်လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောတူရိယာများ unkown တန်ဖိုးကိုကြောင့် Non-ကိုယ်စားလှယ်နမူနာများအသုံးပြုခြင်းကနေခံစားခဲ့ကြရသည်။ ARD, 1977 အတွက် 161 နှစ်ပေါင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်အဘို့အလက်ထပ် 20 စုံတွဲများများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် erectile ပြဿနာများကိုတစ်ဦး 3% ဖြစ်ပွားမှုမှတ်ချက်ချသည်။ 1978 ခုနှစ်, ဖရန့် 100 နှစ်ပေါင်းတစ်အတောအတွင်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူလက်ထပ်နှင့်လိင်တက်ကြွခဲ့ကြသူအသတင်းများအရသာမန် 37 စေတနာ့ဝန်ထမ်းစုံတွဲများ, လေ့လာခဲ့သည်။ ယောက်ျား၏လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကသုတ်ရည်လွှတ်၏တစ်ခုခုကိုစိုက်ထူနှင့်အတူအခက်အခဲကဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင် Nettelbladt ကျပန်းမရွေး, လိင်တက်ကြွအထီး (40 နှစ်ပေါင်းအသက်အရွယ်ဆိုလို) ၏ 31% erectile ပြဿနာများအချို့ကိုဒီဂရီမှတ်ချက်ချပါတယ်။ တှေ့ရှိ တခြားလေ့လာမှု 3-40% ကနေ, erectile ချို့ယွင်းတဲ့ variable ကိုဖြစ်ပွားမှုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ အို၏ Baltimore longitudinal လေ့လာမှုယောက်ျား 8 နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း, 55 တစ်နှစ်ကြားရှိ၏ 25%, 65 တစ်နှစ်ကြားရှိ၏ 55% နှင့် 75 တစ်နှစ်ကြားရှိ၏ 75% ၏ 80% အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ် erectile ချို့ယွင်းထောက်ပြသည်။ အဆိုပါ Charleston နှလုံးလေ့လာမှုအလိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထက် erectile dyfunction အပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ 30-66 နှစ်ပေါင်းသူအသက်အရွယ်အကြားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု 69% ဖြစ်ပွားမှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အသက် 80 နှစ်အတွင်းဘာသာရပ်များအတွက်ဒီကိန်းဂဏန်း 60% အထိမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစာရင်းဇယားမှရရှိသောဘာသာရပ်များလည်း erectile အခက်အခဲများ၏ဖြစ်ပွားနေကျဘို့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ မိသားစုအလေ့အကျင့်လူနာတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, Schein 27 နှစ်ပေါင်းတစ်အတောအတွင်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူ 212 လူနာ 35% ၏ erectile အခက်အခဲတစ်ခုပျံ့နှံ့မှတ်ချက်ချသည်။ Mulligan Self-အစီရင်ခံဆင်းရဲသောသူသည်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင် erectile ပြဿနာများအတွက် 6-ခြံတိုးများနှင့်အသက် 40 နှစ်အတွင်းအလားတူလူနာတစ်ဦး 70-ခြံတိုးထောက်ပြသည်။ တစ်အာဟာရနှင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးကိုစိစစ် undegoing 50 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားတစ်ဆောင်များတွင်ခုနှစ်တွင် Morley ခွန်အားမရှိခြင်း၏ 27% ဖြစ်ပွားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်အတူယောက်ျား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပါတယ်ရှိသည် inferring, မာစတာနှင့် Johns နှင့် Slag ကနေအခြားဒေတာနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌တည်ရှိ၏။
အဆိုပါမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု (MMAS) 40-70 နှစ်ပေါင်းအသက်ယောက်ျားအတွက်အိုမင်းနှင့်ကျန်းမာရေး၏ cross-section, ရပ်ရွာအခြေပြု, ကျပန်း-နမူနာ, multidisciplinary epidemiological စစ်တမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဘော်စတွန်နှင့်အနီးတဝိုက်, 1987-1989 အကြားကောက်ယူခဲ့သည်။ 1290 ဘာသာရပ်များများ၏တုံ့ပြန်မှုအသေးစိတ်, ပြည့်စုံသောမေးခွန်းလွှာ-based တူရိယာများ၏အုပ်ချုပ်ရေးတွင်အောက်ပါအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းကို 1948 အတွက် Kinsey အစီရင်ခံစာကတည်းကအကြီးဆုံးအလုပ်ကိုယ်စားပြုတယ်။ အဆိုပါ MMAS လေ့လာမှုအရွယ်အစားနဲ့ content နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကြိုတင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကွဲပြားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုအသုံးပြုမှု, sociodemographic ဒေတာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့လက္ခဏာများ: ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုဆက်စပ်သောနိုင်ကွား variable တွေကို (ရှက်ကြောက်) ၏လေးအုပ်စုများပါဝင်သည်။
ဒေတာအားလုံးကိုလေ့ကျင့်အင်တာဗျူးအားဖြင့်ဘာသာရပ်ရဲ့အိမ်မှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ multidisciplinary ချဉ်းကပ် gerontologists, အမူအကျင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ, endocrinologist ဖြစ်သူနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု Clinician ပါဝင်သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုဒီဇိုင်းအလားအလာအရေးကြီးသောရှက်ကြောက်ဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားစဉ် key ကို parameters များကိုတိကျသောခန့်မှန်းချက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ကစာရင်းအင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အန္တရာယ်အချက်များ၏မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ နမူနာအုပ်စုသည်အောင်မြင်နိုင်သကဲ့သို့ယေဘုယျလူဦးရေအဖြစ်နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလူဦးရေ, ဖျားနာခဲ့သည်နှင့်ကျန်းမာရေးစနစ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်အရာသာအစိတ်အပိုင်းကိုအခမဲ့-လူနေမှု non-ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအုပ်စုကိုခဲ့ကြသည်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ MMAS တူရိယာ erectile စွမ်းရည်နှင့်ဆက်စပ်သော 23 ရာ9မေးခွန်းများကို, ပါရှိသော။ erectile အာနိသင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလဒိဋ္အကဲဖြတ်တစ်ဦးထက်ပိုအခိုင်အမာသတ်မှတ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြည်နယ်မှဆန့်ကျင်အဖြစ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးကစံကိုက်ညှိလေ့လာမှုကွဲပြားခြားနားသောအာနိသင် profile များကိုခွဲခြားမှုမှကောက်ယူခဲ့သည်။ အာနိသင်4အဆင့်သို့ခွဲခြားခဲ့သည်: အတန်အသင့်သင်ျခြိုနှင့်လုံးဝသင်ျခြို, အနည်းဆုံးသင်ျခြို, သင်ျခြိုမဟုတ်ပါဘူး။
ခွန်အားမရှိခြင်း၏မည်သည့်ဒီဂရီအတွက် MMAS ၏ခြုံငုံနှုန်းကိုမဆိုဒီဂရီ၏ခွန်အားမရှိခြင်း၏ 52% အနည်းဆုံးသင်ျခြို, 17% အတန်အသင့်သင်ျခြိုနှင့် 25% လုံးဝ impotent.The ခြုံငုံဖြစ်နိုင်ခြေ, 10 နှစ်ပေါင်းမှာ 40% နှင့် 39 နှစ်ပေါင်းမှာအပါအဝင် 70% ခဲ့သည် 67% ။ ဤအဒေတာ Extrapolating, erectile ချို့ယွင်းအချို့ကိုပုံစံနှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 30 သန်းယောက်ျားရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများ, စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်, hypoglycemic အေးဂျင့်များနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဆီးချို, သွေးတိုး, နှလုံးရောဂါ, တည်းကကုသမှုမရှိဘူးအစာအိမ်နာရောဂါ, အဆစ်, (vasodilators နှင့် antihypertensive အေးဂျင့်များအပါအဝင်) နှလုံးဆေးဝါးများလည်းပါဝင်သည်။
သွေးကြောရောဂါနှင့် erectile dysfuncion အကြားအသင်းအဖွဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာထိုသွေးကြော hemodynamics (သွေးလွှတ်ကြောမလုံလောက်သို့မဟုတ် corporovenocclusive ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ရှိမရှိ) မြားတှငျပွောငျးလဲအော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းမရှိဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ myocardial infarction, သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောလမ်းလွှဲခွဲစိတ်ကုသမှုကဲ့သို့သောသွေးကြောရောဂါ, ဦးနှောက်သွေးကြောမတော်တဆမှု, ရံသွေးကြောရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါအားလုံးမှတ်တမ်းတင် vasculopathies မရှိဘဲယေဘုယျအားဖြင့်လူဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါခွန်အားမရှိခြင်း၏မြင့်မားဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။ Myocardial infarction (MI) နှင့် corornary သွေးကြောလမ်းလွှဲခွဲစိတ်ကုသမှုအသီးသီး 64% အတွက် erectile အခက်အခဲများနှင့် 57% နဲ့ဆက်စပ်ပါပြီ။ ထို့အပွငျ 130 သင်ျခြိုယောက်ျား၏အုပ်စုတစုအတွက်, MI ၏ဖြစ်ပွားမှုပုံမှန် PBI (8% vs 12%) နှင့်အတူများထက်ပုံမှန်မဟုတ်သော penile-brachial ညွှန်းကိန်း (PBI) နဲ့အမျိုးသားများတွင် 1.5 ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အရံသွေးကြောရောဂါ (PVD) နဲ့ယောက်ျားအတွက်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖြစ်ပွားမှု 80% မှာခန့်မှန်းထားသည်။ ဒါကကိန်းဂဏန်းတည်းကကုသမှုမရှိဘူးသွေးတိုးရောဂါယောက်ျားအတွက် 10% ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏ဆက်စပ် vasculopathy နှင့်အတူဆီးချိုရောဂါအထွေထွေသောလူဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအားလုံးအသက်အရွယ်မှာခွန်အားမရှိခြင်း၏မြင့်မားဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ All-နေရဆဲဆီးချိုရောဂါအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ပျံ့နှံ့ variable 35 နှင့် 75% အကြားမှာခန့်မှန်းထားသည်။ Erectile အခက်အခဲများဒီဖြစ်စဉ်အသစ်ရောဂါဆီးချိုရောဂါ၏ 12% အတွက် occuring, ဆီးချို၏ harbinger ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆီးချိုရောဂါအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ဖြစ်ပွားမှုအသက်အရွယ်-မှီခိုဖြစ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်းဆီးချိုရောဂါမှနှိုင်းယှဉ်လူငယ်-စတင်ခြင်းဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ခွန်အားမရှိခြင်း 505 သူတို့ရဲ့ဆီးချိုရောဂါ၏ရောဂါ၏ 5-10 နှစ်အတွင်းဒါပြုကြလိမ့်မည်ဖွံ့ဖြိုးမယ့်သူတွေကိုဆီးချိုယောက်ျား၏။ ဆီးချိုရောဂါအတွက်သွေးတိုးရောဂါသည်ရောဂါခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ပို. ပင်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
(ဥပမာ, စီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်, သွေးတိုးရောဂါ, နှလုံးရောဂါ, hyperlipidemia နှင့်ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့သော) သွေးကြောအန္တရာယ်အချက်များ၏နံပါတ်ဒါတိုးပွါးအဖြစ်လည်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါဘူး။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဤလူတို့၏ 400% ဖြစ်စဉ်မူမမှန်ခဲ့သွေးကြောအန္တရာယ်အချက်များအထွေထွေသောလူဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအုပ်စုတွင်ပိုပြီးဘုံခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုသရုပ်ပြ, 80 သင်ျခြိုယောက်ျား၏ Virag ရဲ့သုံးသပ်ချက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အန်ဒရိုဂျင်ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စုများ၏တိုးတက်မှုနှင့်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်စဉ်အခါ, erectile လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလယ်တန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လိင်စိတ်၏ရှေ့မှောက်တွင်သူတို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင်ပြည့်စုံဟော်မုန်း panel ကိုတိုင်းလူနာအတွက်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်း testosterone ဟော်မုန်းပြဌာန်းခွင့်ရှိမရှိလိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိသင့်လျော်တဲ့ဟော်မုန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏သဘောသဘာဝထိရောက်သောစိစစ်အခြေအတင်ဆွေးနွေးဖြစ်နေဆဲပါဝင်သည်။ အမှန်စင်စစ်သဘောထားကွဲလွဲအခမဲ့သို့မဟုတ်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်တို့သည်သင်ျခြိုယောက်ျားကိုသူကအကဲဖြတ်ပိုမိုအရေးကြီးလှသည်ရှိမရှိအပေါ်တည်ရှိ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ endocrinopathies ဖြစ်ကောင်းအားလုံးအော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ 3-6% အကြားတက်ဘို့အကောင့်များနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါသူတို့အ endocrinopathies hypogonadism, hypothyroidism, hyperthyroidism, hyperprolactinemia, များတွင်ဆီးချိုရောဂါ, adrenal မမှန်, နာတာရှည်အသည်းရောဂါ, နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပျက်ကွက်နှင့် AIDS တို့ပါဝင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဆက်စပ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဘုံသည်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသွေးဆောင်နိုင်သောဆေးဝါးများစာရင်းသိသာသည်။ ဆေးဝါး-သွေးဆောင်ခွန်အားမရှိခြင်း amedical ပြင်ပလူနာဆေးခန်းများတွင်လူနာအထိ 25% အတွက်ပေါ်ပေါက်ခန့်မှန်းထားသည်။ Antihypertensive အေးဂျင့်လူနာ 4-40% အတွက်တိကျတဲ့အေးဂျင့်တို့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး, erectile diffiulcties နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုဗဟိုအဆင့် (clonidine) မှာလုပ်ရပ်များအားဖြင့်, တပ်ကြပ်အဆင့်ကို (ကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers) မှာသို့မဟုတ်သက်သက်သာလူနာ penile ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်လုံလောက်သောတစ်ဦး intracorporal ဖိအား mainatin မှအားကိုးသောအပေါ်သို့စနစ်တကျအသွေးတော် prerssure ကျဆင်းနေခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်ခွန်အားမရှိခြင်းသွေးဆောင် မာကျောမှု။
အများအပြားကဆေးဝါးများသူတို့ရဲ့ Anti-အန်ဒရိုဂျင်လုပ်ရပ်တွေကိုဥပမာအီစရိုဂျင်, LHRH agonists, H2 ရန်နှင့် spironolactone အပေါ်အခြေခံပြီးခွန်အားမရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ Digoxin intracellular Ca နှင့် coporal ချောမွေ့ကြွက်သားအတွက်နောက်ဆက်တွဲတိုးချဲ့သေံအတွက်ပိုက်ကွန်တိုးအတွက်ရရှိလာတဲ့အတွက် NA-K သည်-ATPase စုပ်စက်၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှတဆင့် erectile အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ အဆိုပါစိတ်ဆေးဝါးများ CNS ယန္တရားများပြောင်းလဲပစ်။ အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အသုံးပြုမှု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အခွားသောအေးဂျင့်များ, သေး၏အဖြစ်, မှတစ်ဆင့်အမည်မသိယန္တရားများစိုက်ထူအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူကခွန်အားမရှိခြင်းဖြစ်စေတဲ့သံသယတစ်ခုချင်းစီကိုဆေးဝါးများအတွက်ယန္တရားသတ်မှတ်ပေးဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါက၎င်း၏ပြတ်တောက်ပေါ်မှာပြဿနာရဲ့ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ရပ်နားခြင်းနှင့်အတူပြဿနာ reproducibility အပေါ်သို့ predicated ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆီးစပ်စိတ်ဒဏ်ရာ, ထိုပျဉ်တင်ပါးဆုံတွင်းအရိုးကျိုးဖို့အထူးသဖြင့်ဒဏ်ရာအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ်-based အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့တင်ဆက်ထားပါတယ်လူနာတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့တိန်းလူနာ een ၏ 35 စိတ်ဒဏ်ရာကနေရရှိလာတဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောခွန်အားမရှိခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် pathophysiologic ယန္တရားများယခင်က postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်က erectile အခက်အခဲများနှင့်အတူလုလင်တစ်ဦးအချိုးအစားမညီမျှမှုအရေအတွက်ကစက်ဘီးစီးမတော်တဆမှုတစ်ခုသမိုင်းရှိသည်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ svere တင်ပါးဆုံတွင်းအရိုးကျိုးတွင်တွေ့မြင်အဖြစ် prostatomembranous urethra ၏နှောင့်အယှက်တစ်ခုတက်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ 50% ဖြစ်ပွားမှုမှအတူ asssociated ခံရဖို့သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ အာရုံကြော-ကြဲသို့မဟုတ်မ, TURP, ပြည်တွင်းရေး urethrotomy, perineal urethroplasty တင်ပါးဆုံတွင်း exenterative လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိမရှိ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစေအစီရင်ခံခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါစစ်ဆင်ရေး, အစွန်းရောက် prostatectomy, retropubic နှင့် perineal ပါဝင်သည်။
15 နှစ်ပေါင်းအချိန်အထိလွန်ခဲ့တဲ့ခွန်အားမရှိခြင်းတို့သညျလူအများစုအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကို၏ရလဒ်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောအလုပျသမားစိတ်ကျရောဂါနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့သရုပ်ပြပါပြီ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်စုံတွဲများ၏ 25% အတွက်အိမ်ထောင်ရေးစိတ်တိုးပွားဆက်နွယ်နေကြောင်း။ အဆိုပါ MMAS မှာတော့ erectile ပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ် psycholgic အချက်များစိတ်ကျရောဂါ, အမျက်ဒေါသနှင့်ကြီးစိုး၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည်။
အပြင်ပြီးသားဖော်ပြထားသည့်အချက်များမှအောက်ပါအခြေအနေများ impotence ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ (သွေးကြောအန္တရာယ်အချက်များ, endocrinopthies နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကို) erectile ပြဿနာများသွေးဆောင်ခြင်းငှါ:
ကျောက်ကပ်ပျက်ကွက်: 40 အထိနာတာရှည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပျက်ကွက်ခံစားနေရပြီးယောက်ျား၏% erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအချို့ကိုပုံစံရှိသည်။ ဒီရောဂါအတွက်အရာခွန်အားမရှိခြင်းရလဒ်များကိုအားဖြင့်ယန္တရား endocrinologic (hypogonadism, hyperprolactinemia), neuropathic (ဆီးချိုရောဂါ-သွေးဆောင် nephropathy) နှင့်သွေးကြောအချက်များပါဝင်သော, ဖြစ်ကောင်း multifactorial ဖြစ်ပါတယ်။ Hatzichristou undegone hemodynamic အကဲဖြတ်သူနာတာရှည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပျက်ကွက်နှင့်အတူယောက်ျား၏အဆောင်များတွင်အတွက်သွေးကြော etiologies စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် corporovenocclusive ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုတပ်မြင့်မားဖြစ်ပွားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလူနာအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာအစားထိုး၏အခန်းကဏ္ဍကို variable ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အချို့မှာတော့အစားထိုးကုသလူနာ erectile function ကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်အခြားသူများ,2အစားထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သောအထူးသဖြင့်သူတို့အားယောက်ျားထဲမှာ, erectile function ကိုထပ်မံဆိုးရွားစေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိပွိုင့်ဖို့ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အာရုံကြောချို့ယွင်း: • Neurogenic disease အာရုံကြော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုထိုကဲ့သို့သောလေဖြတ်, ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးကင်ဆာအဖြစ်မမှန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါ, ဦးနှောက်ရောဂါကူးစက်, အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ, ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်မျိုးစုံနဗ်ကြော (က MS) ။ စတိန်းက MS နှင့်အတူယောက်ျား၏ 85% erectile အခက်အခဲများကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြမှတ်ချက်ချစဉ် Agarwal, လေဖြတ်ခြင်းတွင်အောက်ပါတို့သညျလူတစျစုအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ 71% ဖြစ်ပွားမှုထောက်ပြသည်။ ပိုများသောမကြာသေးမီကပြုလုပ် AIDS ရောဂါ• Neurogenic disease အာရုံကြော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ neuropathy နှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြု beenn သိရသည်။
အဆုတ်ရောဂါများ: ဖလက်ချာဟာ COPD မူလတန်း etiologic အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်အကြံပြုခြင်း, Doppler အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်သာမန်အရံများနှင့် penile ပဲမျိုးစုံခဲ့သမျှသောအဘယ်သူကို၏နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ (COPD) နဲ့ယောက်ျားအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ 30% ဖြစ်ပွားမှု, မှတ်ချက်ချသည်။
စနစ်မမှန်: အပြင်ပြီးသားအချို့သောအခြားမမှန်ခွန်အားမရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည် (ဆီးချို, သွေးကြောရောဂါများ, ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာရှုံးနိမ်) ဖော်ပြခဲ့တဲ့ရောဂါများမှ။ Scleroderma ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်သောသေးငယ်တဲ့ရေယာဉ် vasculopathy ၏ရလဒ်အဖြစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ နာတာရှည်အသည်းရောဂါကဒီရောဂါလူနာများ၏% 50 မှတက်အတွက် erectile ချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဒီဖြစ်ပွားမှုအသည်းကမောက်ကမဖြစ်မှု, Non-အရက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုရှိခြင်းအရက်အသည်းရောဂါ၏ etiology အပေါ်အတန်ငယ် dpendent ဖြစ်ပါတယ်။